Kismaayo News » Agoonta Booliska oo xarun loo sameeyay
Agoonta Booliska oo xarun loo sameeyay
Kn: Dawladda dhexe ayaa tan iyo burburkii dalka markii ugu horaysay hirgalisay xarun lagu xanaaneeyo agoonta ciidamada Booliska taasi ooy si wadajir ah maanta xarigga uga jareen wasiirka Amniga ee dawladda federaalka, Maxamed Abuukar Isloow iyo ku simaha taliyaha Booliska qaranka Soomaaliyeed, Gen. Mukhtaar Xuseen Afrax.
Xaruntan oo laga dhisay dhinaca danbe ee Isbitaal Madina ayaa loogu magacdaray Maxamed Abshir Muuse oo ahaa taliyihii ugu horeeyay ciidamada Booliska Soomaaliyeed waxayna xaruntu ka koobantahay Iskuul, dugsi Qur’aan, goobo lagu ciyaaro, masaajid lagu cibaadaysto iyo qaybihii jiifka.
Dufcadii ugu horaysan ee maanta lagu furay xaruntan ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa caruur ay waalindiintood ku dhimatay qarixii masiibada ahaa ee ka dhacay 14-kii Octobar Isgoyska Zoobe.
Furitaanka Xaruntan ayaa ku soo aadaya xili dalku baahi wayn u qabo xarumo kuwan oo kale ah oo lagu daryeelo waxna lagu baro caruurta danyarta ah iyo kuwa waalid la’aanta ah. Hadii wasaarad kasta iyo wakaalad kasta ama ha ahaato heer federal ama heer maamul gobolleed ay qabsato shaqadeeda oo dadka ugu adeegto si daacad ah waxaa hubaal ah in Bulshada Soomaaliyeed oo ah mid firfircoon, caqli iyo garaadna Alle u dhaliyay inay mudo gaaban ku noqon karaan hogaanka Afrika.